विना एजेण्डा बस्यो नेकपा संसदीय दलको बैठक – Yug Aahwan Daily
विना एजेण्डा बस्यो नेकपा संसदीय दलको बैठक
डल्लो बजेटले दलमा लफडा
युग संवाददाता । १५ असार २०७७, सोमबार ०९:३१ मा प्रकाशित
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी संसदीय दल कर्णाली प्रदेशको बैठक विना एजेण्डा दुई दिन बसेको छ । सरकारमा रहेका मन्त्रीहरुलाई फिर्ता बोलाउने, बजेट माथि सत्तारुढ सांसदको आक्रोस मत्थर पार्ने लगायतका एजेण्डामा छलफल हुने कुरा थियो ।
असार १३ गते विहान सात बजे सुरु भएको बैठकको सुरुमै सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ का लागि ल्याइएको बजेट माथि एक घण्टा बोलेका थिए । उनले बोले लगत्तै अन्य कुनै पनि एजेण्डा तय नगरी सरकार विरुद्ध सत्तारुढ दलका सांसदहरुले बजेटमाथि, सरकारको कार्यशैली माथि लगातार आक्रोस पोखिरहे ।
सोही दिनको अन्तिम वत्ताका रुपमा रहेका सांसद धर्मराज रेग्मीले एजेण्डा विहीन बैठकको के अर्थ छ भनेर प्रश्न गरे । ‘बैठकको एजेण्डा के हो ? किन बोलाइएको हो ? बजेटकै विषयमा हो की अरु केहि हो ?’ उनले भनेका थिए, ‘विना एजेण्डा दुइ दिनसम्म बैठक बस्नुको कारण के रहेछ ?’ सत्तारुढ दलका ३१ जना संसदहरुको सहभागिता रहेको उक्त बैठक असार १४ गते विहान ८ बजेदेखि साँझ ८ बजेसम्म बसेको थियो । बैठकमा चन्द्रबहादुर शाही, करवीर शाही, देवी वली, सीता नेपाली, गुलावजंग शाही, यामलाल कंडेल लगायतले आफ्ना धारणा राखेका थिए ।
तर ती सबैको धारणा बजेट संशोधन गर्ने, सरकारका काम कारवाही चुस्त र दुरुस्त बनाउनु पर्ने भनाई राखे । ‘हामीले त सरकारलाई निरन्तर खबरदारी गरिरहेका छौं । सरकार तीव्र गतिका साथमा हिडनु पर्छ । कहाँ समस्या छन्, ती समस्या समाधान गर्न हामी तयार नै छौं ।’ एक सांसदले भने, ‘तरपनि सरकार टसको मस हुँदैन । कर्मचारीकै आधारमा बजेट बनाउने, उनीहरुको हामीमुहाली हुने र जिल्लामा डल्लो बजेट पठाई कार्यान्वयनमा कर्मचारीकै हात माथि पर्ने काम गलत हो । कम्तीमा सरकारले डल्लो बजेट फुटाउनै पर्छ । यो वर्ष घाटा बजेट पनि छैन । धेरै बजेट कम भएको पनि छैन । सरकारले बजेट सुधार नगरेसम्म हामी ताली बजाएर पास गर्ने पक्षमा हामी छैनौं ।’
दलका प्रमुख सचेतक गुलावजंग शाहले बैठकमा समसामयिक एजेण्डा भएको बताए । ‘सरकारलाई माननीयले डल्लो बजेट फुटाउन, सरकारलाई परेका समस्या समाधान गर्न आवश्यक सुझाव दिनु भएको हो ।’ उनले भने, ‘माननीय ज्यूहरुको बजेट प्रति र सरकारको काम कारवाही प्रति चर्को असन्तुष्टि बैठकमा देखियो । दलको बैठकको अन्य ऐजेण्डा भन्दा पनि बजेटकै पेरीफेरी थियो । सरकारका मन्त्रीहरु फेर्ने भन्ने कुरा एजेण्डा नै थिएन ।’